Snapchat dia manolotra ny "Story Explorer" ho zava-baovao | Androidsis
Snapchat sy ny fikarohany raikipohy vaovao toa ilay farany: "Story Explorer"
Toa mahita i Snapchat ao aminy ny hatsarany lehibe indrindra hikaroka rijan-kevitra vaovao ary hamolavola azy ireo ho endrika vaovao manintona sy mahasarika ny besinimaro. Ny fitadiavana ny tenany dia satria ny fomba nahaterahany, fampiharana izay tsy nisy nahalala sy nalaza noho ireo sary manimba tena, dia nanampy azy hahatsapa fa ny famoronana sy ny maha-izy azy no antony nahatonga azy.
Ka izao dia mikasa ny hitrandraka izany tanteraka amin'ireto hevi-baovao ireto izy amin'ny endrika endri-javatra ahafahan'izy ireo manomboka mioty tombony rehefa nandany vola be izy ireo taloha. Ankehitriny, Snapchat dia nanolotra fampisehoana iray antsoina hoe "Story Explorer" na "Story Explorer", izay manamora ny fampiasan'ny mpampiasa azy tadiavo ireo fotoana izay manandanja. Ity fampiasa ity dia hampifandraisina amin'ireo fotoana an-jatony na an'arivony izay zaraina amin'ireo mpampiasa an-jatony sy an'arivony maro izay mampiasa ity fampiharana ity isan'andro.
1 Snaps mamorona tantara
2 Hevitra, famoronana ary ny maha-izy azy
Snaps mamorona tantara
Hivoaka ity fampiasa ity tamin'ny voalohany tany Los Angeles ary New York, ary hipaka hatrany amin'ny faritra sisa tavela eto izao. Fitaovana iray izay hita amin'ireo tantara ao amin'ny Snapchat, izay ahafahanao mijery azy ireo amin'ny swipe tsotra araka izay hita ao amin'ny horonantsary aseho azy.
Araka ny hita ao amin'ny horonantsary, rehefa manaisotra fotoana vaovao isika dia miseho eo alohanay, izay ahafahantsika mahita ilay hetsika mitovy nefa amin'ny fomba fijery hafa. Ity dia ampahan'ny teknolojia hoy i Snapchat fa efa nivoatra.
Ny tanjona dia ny hanome anao fikambanana lehibe kokoa sy halaliny amin'ireo Snaps ireo izay noforonina mba hampahafantarana azy ireo ao anatin'ny tantarany manokana. Ny tsy fantatsika dia hoe rahoviana no hanitatra ity mpampiasa ity amin'ny mpampiasa maro hafa any amin'ny faritra hafa, fa ny voalaza, toa tsy haharitra izy ireo, ary bebe kokoa amin'ny Krismasy efa ho tapitra.
Hevitra, famoronana ary ny maha-izy azy
Ity zava-baovao ity dia manaraka fotsiny ny fivarotana solomaso karama izay mamela ny mpampiasa an'ity rindranasa ity hividy vaovao amin'ny latsaky ny iray euro. Io dia namela ny isan'ireo karazana sivana ireo hitombo ao amin'ny magazay. Snapchat manaraka fandefasana lantana karama 30 isan'andro ao amin'ny fivarotanao ho an'ny mpampiasa any Australia, Brazil, Canada, Saudi Arabia ary United Kingdom. Ny sisa amintsika dia mbola mila miandry kely vao afaka miditra amin'ireo vaovao roa ireo, ka manam-paharetana kely.
Mifanaraka amin'ity zava-baovao izay mamorona ny «Story Explorer» ity, afaka mitolo-batana amin'ny porofo atrehintsika isika iray amin'ireo mpamorona manana famoronana lehibe indrindra ary izany dia loharanom-aingam-panahy ka ny lehibe hafa, toa ny Instagram na Facebook, dia mandika ny hevitr'izy ireo ary avy eo mitondra azy ireo any amin'ny serivisin'izy ireo na fampiharana azy manokana. Amin'izany dia tsy milaza aho fa tsy mandray hevitra amin'ny hafa koa izy ireo, fa ny marina dia ny maha-izy azy ny Snapchat miaraka amin'ny asany manokana, mijanona mahitsy nefa tsy entin'ny tolo-kevitra amin'ny endrika vola ary mahalala ny fomba hahitana fomba iray hanangonam-bola ny fampiharana, dia manampy azy ireo hanohy hivoatra sy hanatsara ny fampiharana.
Izao no ilazantsika izany manana Snapchat be dia be izahay mandritra ny fotoana kelikely, ary azo antoka fa tsy ho ela izy ireo handefa ny sasany amin'ireo hevitra adaladala ireo, izay ho azon'izy ireo ao ambadiky ny sehatra, hamaky tahaka ny nataony ihany rehefa nahita rindranasa iray mizara sary manimba tena amin'ny fotoana vitsivitsy ary izay fantatsika avy amin'ny Snapchat.
Mandritra izany fotoana izany dia miandry kely ity fampiasa vaovao "Story Explorer" ity isika Tonga tany amin'ireo faritra ireo aho ary inona ireo solomaso manokana hamelomana ny Krismasy ananantsika eo akaiky eo. Heveriko fa ho fantatr'izy ireo ihany fa afaka mahazo tombony lehibe kokoa izy ireo raha manitatra ireo fiasa vaovao alohan'ny sakafo hariva, polvorones ary nougat.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Snapchat sy ny fikarohany raikipohy vaovao toa ilay farany: "Story Explorer"
Vertu Aster Yosegi dia smartphone hafa sy manokana miaraka amina famaranana hazo